Sariitatry ny Mpaminany sy ny Krizy Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Sariitatry ny Mpaminany sy ny Krizy Nokleary
Voadika ny 19 Oktobra 2017 3:34 GMT
Lohahevitra mafana eo amin'ireo bilaogera ireo sariitatra 12 an'ny Mpampinany Silamo navoakan'ny gazety Danoa, Jyllands Posten. View from Iran, bilaogera monina ao Iran niteny hoe:
“Rikoriko aho – eny, izay no teny marina – avy amin'ny tohan-kevitry ny andaniny roa:
Samy somary mikorontana sy mitompo teny fatratra ireo mpanohana ny sariitatra sy ireo mpitsikera ny sariitatra. Toy ny mitaky fanontana pirinty sy fanontana pirinty indray an'ireo dokambarotra miverimberina tafahoatra ny fahalalahana miteny … ary toy ny hoe fitsipika ara-dalàna eo amin'izao tontolo izao ankehitriny ny fitenenan-dratsy “.
Yek Estekan Chayi Dagh (persiana – midika hoe, kaopy misy dite mafana) nanoratra momba ny fihetsiketsehana mahery setra. Milaza izy fa tsy misy ifandraisany amin'ny fitondrantena sy ny fampianaran'ny Mpaminany ity karazana hetsika ity. Nampiany koa fa manamafy fotsiny ny antoko ara-politika farany havanana manohitra ny mpifindra monina ity karazana hetsika mahery setra ity.
Tao amin'ny bilaogy Islamista, Edoarno Agnelli , namaky izahay fa nisy mpitondra fivavahana iray tany Norvezy nilaza fa nanomboka ny ady ary tsy manova na inona na inona ny ny fialan-tsinin'ny Norveziana na Danoa. Tsy maintsy miomana amin'ny ady ny Miozolomana.
Bilaogy Islamista iray hafa, Entegham (midika hoe Valifaty) namoaka sary misy ireo entana Norveziana sy Danoà ary nanasa ny olona mba hanao ankivy azy ireo. Nanasa ireo mpijirika ihany koa ilay bilaogera mba hanafika ny tranonkalan'ireo masoivoho izay nanevateva ny Mpampinany!
Lohahevitra iray mafàna ny fanapahan-kevitry ny Sampan-draharahan'ny Angovo Atomika hitatitra an'i Iran any amin'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana. Mandray ity tranga ity ho horohorontany eo amin'ny diplaomasia Iraniana ny bilaogera ary mandray ny governemanta Iraniana ho tsotra loatra matoky an'ireo firenena tatsinanana toa an'i India sy i Shina.
Shahram Kholdi, mpampianatra ambony sady bilaogera monina any UK nilaza hoe:
“Maneho ohatra i India fa na dia ny fahefana lehibe mirongatra aza izy dia tsy vonona hamoy ny toerany goavana amin'ny sehatra toy ny fifanakalozana teknolojian-drindrambaiko amin'ny Etazonia, na ny fampiraharahany manokana momba ny teknolojia nokleary amin'i Etazonia, na ny hetahetany momba ny teknolojia an'habakabaka, na ny faniriana hahazo seza maharitra ao amin'ny Filan-kevitry ny Fiarovana ao amin'ny Firenena Mikambana, ho fanohanana ny fantson-tsolika tena ilaina indrindra izay nampanantenain'ny fitondrana Iraniana fa omena azy. Raha ny tena izy dia, tsy mendrika ampanantenaina ireo faniriana ireo ao amin'ny firenena kely tahaka an'i Iran.
FM Sokhan, bilaogera sady mpanao gazety monina ao Iran nanoratra fa i nandao ny governemanta Iraniana ho irery i Shina, i India ary i Rosia izay nampanantena hanohana an'i Iran. Heveriny ho horohorontany izay mampihovitrovitra ny milina diplaomatika Iraniana sy ny finoan-jazakeliny amin'ny fandraisana andraikitra.